Sida loo noqdo hooyo waqti buuxa shaqeyneysa 2022
Bogga ugu weyn Sida Loo Noqdo Hooyo Waqti-buuxa Wax-ku-ool ah 2022
Hooyada shaqaysa ma aha doorasho, waa xaqiiqo u taal dumar badan. had iyo jeer ma fududa in la helo dheelitirka u dhexeeya noqoshada hooyo waqti-buuxa ah iyo hooyo shaqaysa. Maxaad samayn kartaa si ay kaaga caawiso inaad haysato dhammaantood oo aad u hesho dheelitirkaas qumman?
Maqaalkan, waxaan kugu hagi doonnaa sida aad ugu noqon lahayd hooyo waqti buuxa leh oo wax ku ool ah oo aan dambi lahayn.
Dumarku waa dhiirigelin. Inta u dhaxaysa dhalashada iyo qabashada shaqada, waxay weli maamulaan inay qabtaan jagooyin awood sare leh oo ku kala baahsan warshado kala duwan; waxay bilaabaan ganacsiyo iyaga u gaar ah waxayna koriyaan qoysas.
Marka loo eego tirakoobyada, qiyaastii boqolkiiba 70 dumarka Mareykanka ee carruurta leh ayaa ku jira xoogga shaqaalaha. Laakiin iyada oo kaliya 24 saacadood maalintii, sidee bay dhammaantood u sameeyaan?
Aynu ku quusinno ka doodista sida loo noqdo hooyo wax-ku-ool ah oo waqti-buuxa shaqaynaysa.
Sida loo noqdo hooyo waqti buuxa shaqeyneysa
Hoos waxaa ku qoran talooyin ku saabsan sida aad u heli karto shaqo waqti-buuxa ah oo buuxa adiga oo qaadanaya kaalin firfircoon hooyo ahaan.
#1. Iska daa dembiga hooyada
Hooyooyinka ayaa inta badan lagu cambaareeyaa inay "ka tageen" carruurtooda markay ku noqdaan shaqo waqti-buuxa ah, halka aabbayaasha laga filayo inay shaqo tagaan si ay "u taageeraan" qoyska. Waa maxay sababta hal -abuurnimadan jinsi ahaaneed ay wali ugu dhex jirto bulshadeena u muuqata horumarka?
Dumarka qaarkood ma haystaan ​​ikhtiyaar ay ku sii ahaadaan hooyooyin, halka qaar kalena ay doortaan inay ku noqdaan shaqada sababtoo ah ma rabaan inay ka tanaasulaan shaqadooda. Sabab kasta ha ahaato, go’aaminta inaad noqoto hooyo shaqaysa waa doorasho lagu majeerto, aan la xukumin, ama laga xishoon. Haddii ay dareento dambi ah in aysan la joogin ilmaheeda mar walba, waa waqtigii la sii dayn lahaa.
U fiirso waxyaalaha wanaagsan ee noloshaada shaqadu u keento qoyskaaga. Ku kalsoonow inaad samaynayso go'aanka ugu fiican qoyskaaga oo dhan, oo ay ku jirto naftaada, iyo ilmahaagu wuxuu dareemi doonaa heerka jacaylkaaga oo uu fahmi doono nafteeda.
#2. Isticmaal xeelado si aad waqtiga u badbaadiso
Isticmaal gaagaabyada oo u qorshee xeelad ahaan si aad ugu dadaasho waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah.
Raashinkaaga ka dalbo onlayn oo isticmaal baabuurka jarka saaran ama ha lagu geeyo gurigaaga; Tani waxay badbaadinaysaa waqtiga OO waxay hubineysaa inaadan waxba ilaawin.
Shirarka Jadwalka wuxuu ku baaqayaa safarkaaga maalinlaha ah wuxuuna sameeyaa dukaameysi degdeg ah inta lagu jiro fasaxa qadadaada si aad u siiso waqti dheeraad ah inta lagu jiro usbuuca.
Xirxir dharka iyo qado habeenka ka horreeya si aad ugu raaxaysato subaxda intii aad ku degdegi lahayd waqtiga.
#3. Raadi Bixiyeyaasha Daryeelka Carruurta ee aad Ku Kalsoon tahay
Ogaanshaha in ilmahaaga la daryeelo ayaa lama huraan u ah nabada maskaxdaada markaad shaqada ku jirto. Soo hel xannaano -maalmeed, ilmo -haye, ama qof aad taqaan oo ku kalsoon ilmahaaga.
Daryeelka ilmaha oo tayo leh waa inuu lahaadaa saacado dabacsanaan leh, saamiga macalinka iyo ilmaha oo hooseeya, jawi nadiif ah oo waasac ah, iyo ruqsadaha cusub.
Daryeelayaasha carruurta, raadi mid leh khibrad ballaaran iyo tixraacyo waaweyn. Qaado ugu yaraan hal maalin oo tijaabo ah si aad u ogaato haddii aad taam tahay oo dhammaan waxyaalaha aad ka filayso caddee bilowga. Haddii ay suurtogal tahay, xiriir joogto ah maalintii oo dhan weydii oo cusboonaysii iyo sawirrada ilmahaaga yar.
#4. Hubi xiriir furan oo lala yeesho maamulahaaga
Inaad noqoto hooyo shaqeyneysa micnaheedu maahan inaad noqon doonto shaqaale wax soo saar leh. Si kastaba ha ahaatee, isbeddellada ayaa laga yaabaa inay dhacaan.
Hooyooyinka badiyaa waa aabbaha ugu weyn marka ilmuhu xanuunsado ama taariikho, soo qaado ilmaha shaqada ka dib; sidaa darteed hooyooyinka shaqeeya inta badan waxay u baahan yihiin dabacsanaan badan jadwaladooda.
Laakiin hooyooyinka shaqeeya ayaa ka mid ah shaqaalaha ugu dadaalka badan agagaarka! Laga bilaabo fasaxyada qadada ilaa dhammaadka usbuuca shaqada, haweenkan uma isticmaalaan cudurdaar carruurtooda inay ku nastaan.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad hubiso inaad maamulahaaga la xiriirto waxa ay u baahan tahay iyo sida ay shaqadeeda si wanaagsan ugu sii waddo. Waxaan rajaynaynaa, in maamulkeedu fahmo oo uu qaddariyo daahfurnaanta iyo u heellanaanta qoyskeeda iyo shaqadeeda.
#5. Iska yaree waxyaabaha kaa jeediya oo waqti lumiya
Wakhtigu waa shay qaali ah markaad tahay hooyo shaqaynaysa.
Shaqada, tixgeli waqtiga aad ku qaadato la -shaqaynta saaxiibbada haddii ay saamaynayso wax -soo -saarkeeda. Xaddid nasashooyinka qadada dheer oo dhex gal shabakadda si aad uga faa'iidaysato wakhtigaaga shaqada.
XIDHIIDHKA: Waa Kuwee Naqshadayaasha Ciyaaraha Fiidiyowga Ugu Lacagta Badan? | Dalalka Ugu Fiican
Markaad guriga joogto, xoogga saar lammaanahaaga iyo ilmahaaga halkii aad ka eegi lahayd taleefankaaga ama telefishankaaga si aad u hubiso in waqtiga aad wada qaadataan uu yahay mid macno leh oo ula kac ah.
Halkan waxaa ah fikrado badan oo ku saabsan sida loo kordhiyo waqtiga qoyskaaga: Sida loo kordhiyo waqtiga qoyskaaga? 13 siyaabood oo sahlan oo isla markiiba loo tijaabiyo
#6. Dib ula xiriir lamaanahaaga
Furaha qoyska farxadda leh wuxuu ka bilaabmaa guur farxad leh. Ka dhig guurkaaga ama xiriirkaaga mid mudnaan leh maadaama ay saamayn weyn ku yeelan doonto wax kasta oo kale.
Haddii ay suurtogal tahay, raadso xannaano -maalmeed oo si joogto ah u bax habeennada taariikhda, adiga oo sameeya waxyaalo labadiinuba aad ku raaxaysateen ka hor intaadan waalid noqon. Ku qorshee wax kale oo aan ahayn casho meeshaada caadiga ah, sida fasalka rinjiyeynta ama habeen aan caadi ahayn.
Wadahadal daacad ah la yeelo lamaanahaaga shaqo la'aanta ah iyo carruurtaada, oo runtii dhegeyso waxay leeyihiin.
#7. Abuur hawlo qoys oo gaar ah oo macno leh.
Ka dhig waqtiga aad la qaadato qoyskaaga si dhab ah u xisaabi marka aad qorshaynayso waxqabadyo qof walba sugi karo kuna raaxaysan karo.
Marti geli ciyaarta qoyska ee toddobaadlaha ah, samee xayndaabka daarada, ama ciyaar golf yar. Waxaan jeclahay inaan qoyskeyga kula lugeeyo jardiinooyinka dhow sababtoo ah waxay na siineysaa fursad aan ku firfircoonaado oo aan yeelano wada sheekeysi wanaagsan. Waydii carruurtaada waaweyn fikrado oo u oggolow inay ka qaybqaataan go'aanka meel kasta oo ay tagaan.
#8. Hel u hoggaansanaanta
Waxaa laga yaabaa inaadan waligaa helin dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya inaad noqoto hooyo waqti-buuxa ah shaqeysa iyo inaad tahay hooyo kaliya, laakiin ma jirto sabab aadan isku deyin.
Sida aan sheegnay, maaha 50. Haddii aad rabto inaad sii shaqeyso ka dib markaad ilmo dhasho ama aadan rabin inaad sugto inaad bilowdo qoyskaaga ilaa xirfadaada lagaa aasaasayo, waxaad u ogolaan kartaa labadoodaba inay shaqeeyaan.
Ku raaxayso inaad hooyo noqoto oo aad dhisto xirfaddaada ugu habboon. Kaliya maahan inay kuu diyaarinayso nolol buuxda, laakiin waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad daryeesho carruurtaada oo aad siiso nolosha ay mudan yihiin.
XIDHIIDHKA: 15ka Apps ee Golf ee ugu Fiican Apple Watch 2022
#9. La wadaag shaqada guriga
Culeyska shaqada guriga waa inuusan ku dhicin garbaha haweeneyda. Tani waa aag u fudud in lammaanahaagu kaa caawiyo dibadda, gaar ahaan haddii aad leedahay hawlo gaar ah oo aad adigu kaliya samayn karto (tusaale, naas -nuujinta, hoos u dhigidda ilmaha).
Haddii carruurtaadu weynaadaan, u xilsaar hawlo fudud si ay u bartaan inay dhisaan caadooyin wanaagsan goor hore oo ay kaalin firfircoon ka qaataan wax ku biirinta qoyska.
#10. La xiriir hooyooyinka kale ee shaqeeya
Kaligaa ma tihid. Waxaa jira malaayiin hooyooyin shaqeeya oo maalin walba kula kulma wax la mid ah adiga.
Hooyooyinka waqtiga buuxa waxay leeyihiin dabacsanaan dheeraad ah si ay u abaabulaan shirarka inta lagu jiro usbuuca, laakiin hooyooyinka shaqeeya ayaa sidoo kale yeelan kara bulsho la mid ah.
Raadso asxaabtaada oo iyaduna ah hooyooyin shaqeeya; Kuwani waa haween aad la xiriiri karto heer aad u kala duwan.
Samee taariikhaha ciyaarta iyo kooxaha hooyooyinka dhammaadka wiigga ama u wada lugeeya shaqada shaqada ka dib. Soo hel hooyooyin kuu dhow adiga oo adeegsanaya Kooxaha Facebook, Kulannada, iyo barnaamijyada sida Peanut iyo Hello Mamas.
Wada qosol, wada sheekooyinka, iyo helida bulshadaada ayaa ku tusi doonta inaadan kaligaa tegin.
Hooyada shaqaysa waxay yeelan kartaa xirfado guul leh iyo nolol qoys oo dhammaystiran. Aqoonso oo qiimee dhammaan waxyaalaha waaweyn ee aad haysato, oo kaliya hal maalin qaado. Waxaa jira shaqooyin aan la rumaysan karin oo loogu talagalay hooyooyinka guriga-jooga, ka ogow maqaalkayaga ku saabsan Sida Loo Helo Lacag Adigoo Guriga Jooga Hooyo.
www.lifehack.org- Siyaabaha Hooyooyinka Shaqeeya Ay Isku Dheeli -Tiri Karaan Shaqada iyo Qoyska (Oo Ku Faraxsan)
maamulka30.com-Haysashada Dhammaan: Inaad Noqoto Hooyo Waqti-buuxa leh Shaqo Buuxda
Sida Loo Bilaabo Meherad Xirfadle Shakhsi | Habka Ganacsiga
Samee Lacag Lagu Iibiyo Caanaha Naaska Online
Xeerarka Caymiska Nolosha ee ugu Fiican iyo Shirkadaha Aan Lahayn Imtixaan Caafimaad 2022
Iibiya Silver: Halkee & Sida Loo Sameeyaa Si Dadaal La'aan ah 2022
15ka Cod ee Farta Farta ah ee Bilaashka ah ee iPhone | 2022
Dukumeenti lagu diyaariyay xarfo gaar ah oo qurxoon ayaa soo jiidan doona daawadayaasha. Tani waxay kor u qaadi kartaa dhibcaha muuqaalka ee…
Shaqo la'aanta Minnesota iyo sida loo xareeyo si loo ururiyo faa'iidooyinkaaga
Shaqaalaha sida ku meel gaadhka ah shaqada uga maqan ee aanay jirin wax khalad ah oo ay iyagu iska leeyihiin gudaha Minnesota, sida…
Immisa Weriye Ayaa Sameeya 2022 | Sharaxaad Shaqo Buuxa
"Intee in le'eg ayay suxufiyiintu sameeyaan"? waxay u badan tahay su’aasha ugu horreysa ee qof kasta isweydiin doono ka hor inta uusan bilaabin saxaafadda…
Saboolnimadu aad bay dadka u neceb yihiin laakiin waa nasiib darro in la necbaado macnaheedu maaha inaysan…
Ciyaaraha Xaqiiqda Ugu Wanaagsan (AR) ee loogu talagalay Andriod & iPhones Sanadka 2022 -ka
Android iyo iPhones waxay u fureen isticmaalyaashooda fursado badan oo dhab ah maantana ciyaaro badan oo horumarsan ayaa soo baxay…